I-Horoscope: Unyaka Omusha, i-Taurus
U-2011 ozayo uthembisa izimo eziningi ezithakazelisayo nezingalindelekile. Lesi yisikhathi sokuguquka kwangaphakathi nangaphandle okusheshayo. Ekuqaleni konyaka kuyoba nesidingo esinamandla samathole sokwandisa ama-horizons awo. Uyothatha ikakhulukazi imibuzo engokomoya nefilosofi. Zama ukuthola imfundo eyengeziwe noma isifundo ukuthi insimu yolwazi owabonakala sengathi ayitholakali ngaphambili.
Esikhathini sokuqala sonyaka kuzoba nezinguquko ezibalulekile ezweni lakho langaphakathi. Yiqiniso, izinguquko zizobonakala kwabanye kuphela engxenyeni yesibili yonyaka. Yilapho ithonya likaJupiter embonweni we-Taurus lizobonakala khona. Uzobe uqiniseka ngokwengeziwe, futhi igunya lakho emphakathini lizoqiniswa. Ihlobo lizoletha izinguquko ezinkulu empilweni yakho yomuntu siqu, uyeke ukukhukhumeza izinkinga eziqoqiwe nezikhalazo ezindala. Ingxenye yokuqala yonyaka ithembisa abantu abaningi abajwayele ukuxhumana nabo nabantu abanentshisekelo nabathintekayo, futhi okwesibili balindele izindaba ezimnandi ezingalindelekile ngomndeni. I-Horoscope ngonyaka omusha: I-Taurus - konke lokho ku-athikili yethu.
Kulo nyaka, ubudlelwane bomshado e buzoholela ekwakheni umbambano omkhulu. Futhi kulabo amathole asebehlale bebambisana nabo, ngokuphambene nalokho, isikhathi sokuthandana nomfutho uzoqala. Kukhona ithuba lokuthi uzohlangana nendoda yangaphandle ukuthi uzokwazi ukunqoba ukwethemba kwakho nokuhlonipha - isibonelo, wazi kangcono uhambo noma uhambo lwakhe lwebhizinisi. Kuze kube sehlobo, ufuna ukufihla ukuxhuma kwakho kwabanye, kodwa kusukela ngo-Juni, ucansi luzoba yindawo ebalulekile yokuphila. Ukuqala kwekwindla uthembisa ukuletha abajwayele ukuzithanda, ukuthatha isikhathi sokuqokwa kanye nokuzijabulisa. Nweba umbuthano wokuxhumana: hamba emakhonsathini, emidlalo yaseshashalazini, i-cinema, kubangani emaqembu. Endaweni lapho lapho, amathole, futhi uhlangana nendoda yamaphupho. Ekupheleni kukaDisemba, qaphela ekuboniseni izifiso, usengozini yokulimaza lo mlingani.
Ukusiza abangani noma abanikazi bamathole kuzoba yisihluthulelo sokuqhubeka kwakho emkhakheni wezemisebenzi. Umsebenzi ngeke ulethe kuphela izinzuzo zomzimba, kodwa futhi ujabule ngokuziphatha. Ubudlelwane nabasebenza nabo emsebenzini akudingeki ukuthi bangabi namafu, kuzodingeka bafake izithakazelo zabo ku-akhawunti futhi benze ukuyekethisa uma kwenzeka ukuxabana. Inhloso, ukubekezela nokukhuthaza kuzosisiza ekuxazululeni konke. Lokhu kuzokwaziswa ngabaphathi. Mayelana nemali nokuzinza akucabangi, manje kubaluleke kakhulu ukukhombisa isinyathelo nokwenza. Unamathemba amasha amaningi namathuba amasha, manje ungahamba waya ezindaweni ezikude zomhlaba. Unethuba lokuthola izinto eziningi ezintsha nezinto eziyigugu kuwe futhi, ukuzindla, ukufunda izincwadi, ukuvakasha ukuqeqeshwa okuthakazelisayo kuzosiza kulokhu. Kusukela ehlobo, uzozizwa ukuthi abanye bazolalela kanjani amazwi akho nezeluleko. Lesi yisikhathi esihle sokuqaphela amathuba akho namathemba akho, wenze uhlelo lwebhizinisi lokuzikhandla futhi ulilandele, ugcwalise kancane kancane izinhlelo zakho.
Mhlawumbe ukuhlukunyezwa ekuqaleni konyaka. Lokhu kuzobangelwa isimo sakho sangaphakathi esingaguquki. Kodwa ungathukutheli - zama nje ukungenzi isikhalazo kumlingani wakho. Ukubhekana nezintshisekelo kungabonwa ngoMeyi, umsebenzi oyinhloko - ukuthola indlela enokuthula yokuxazulula izinkinga nokulwa nokuhlukunyezwa. Ingxenye yesibili yonyaka izoba yimpumelelo kakhulu, igunya lakho lizosebenza. Uma useseyedwa, hamba uhambo - lapho uzohlangana naye. Umsebenzi wakho kulo nyaka ukusebenza kanzima futhi ungalindeli umphumela osheshayo. Ukubekezela futhi uphinde ube nesineke, amandla akho aphikelele futhi akhuthele. Ekuqaleni konyaka, ukuphumelela kulo msebenzi kungenzeka. Zama ukuthi ungayeki kulokho okufeziwe, qiniseka ukuphakamisa izinga lakho lemfundo. Uzethemba wena ngokwakho futhi kuhle - khona-ke inhlanhla iyofika kuwe ngokuqinisekile, udinga nje ukukholelwa kuyo.
Kusukela ngoJuni, amathole ngeke nje azi ukuthi-amandla namandla azokwanda. Ngombono wakho uzocatshangelwa, futhi iseluleko - ukulalela. Igama lokugcina lizoba lenu kunoma yikuphi ukuphikisana.
Abangane kanye nozakwabo
Ubuhlobo nabangani emanzini buzoba kuhle. Kungenzeka ukuthi omunye wabo uzohlinzeka ngokusekelwa okubalulekile ekubekeni komsebenzi noma akulethe emphakathini ophakeme wezenhlalakahle.
Umusa ngokuhambisana nokuqina komlingisi kungumthombo wamandla akho. Futhi nakuba ungajwayele ukuthatha izingozi, kodwa isibindi sonyaka kanye ne-adventurism kuzokusiza ukuba ufinyelele umgomo wakho othandekayo. Ukukhanya kancane kancane - nakho konke kuzovela.
Sebenzisa wonke amathuba okuhamba. Uhambo lwezebhizinisi, iholide, ngempelasonto - yimuphi umehluko okwenzayo? Okuyinhloko ukuthi ngokushintsha isimo uzoba namandla okusebenza okuzayo, ukuphumelela nokuphumelela.
I-Tonus, impumelelo, impilo
Isibopho sokuphila kahle kwamathole - imithwalo yemidlalo yansuku zonke nokudla okunempilo. Faka emenyu imenyu yemvelo kuphela nempilo enempilo.
I-Horoscope ngezifiso, ukuhambisana kwe-horoscope
I-Horoscope ka-2010, i-Capricorn - owesifazane
I-Horoscope yamawele ngonyaka we-tiger
I-horoscope yomuntu ngamunye ngezinsuku zokuphela kwelanga
Umkhuba Wokuhlanza Indlu
Izakhiwo nezithombe zetshe le-tiger iso
Isaladi kusuka ku-beet fresh ne-sauerkraut
Izinwele zezinwele ezisezingeni eliphezulu ezingaphezulu kwezingu-4 ze "ntombazane": yenza isithombe sakho sibe nesisindo!
I-Horoscope yama-Aries ka-2010 ngezinyanga
Inkukhu fillet nge zucchini kanye pepper elimnandi
I-syndrome ye "ukukhathala" kwezingqungquthela eziyingozi: kanjani ukulwa?
I-Strawberry pie ne-buttermilk
I-Focaccia isinkwa sase-Italy
Indlela yokuthola isimo sengqondo esihle
Izimpawu nokubhula kweVasiliev kusihlwa
I-pastry epholile yama-pie
Isaladi ngekhukhamba kanye nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
Ukukhipha isisu - ukuqeda ukwelashwa kokukhulelwa